Just iska ilaawaan telefoonka Android jir, sida Droid Razr, oo ay noqoto xubin ka mid ah taageerayaasha HTC? Ay u badan tahay in aad dooneyso in lagu wareejiyo content ka Android in aad telefoon cusub HTC. Raacdeeya qalab ugu dambeeyay ee Android, si aad u bedesho phone HTC in mid cusub, sida Samsung Galaxy S4? No arrin taas oo kooxda aad taagan tahay, waxa ugu muhiimsan ee aad u waa si ay u gudbiyaan content dhexeeya Android iyo HTC. Maqaalkani waxa uu ku talinayaa in aad laba qalab kala iibsiga phone waxtar leh inay idinka caawiyaan. Mid ka mid ah waa Transfer Tool HTC, file a APK yar, ka kalena waa Wondershare MobileTrans ah, phone desktop qalab kala iibsiga xirfadeed.
Xalka 1: HTC Transfer Tool: ka Android wareejinta xogta si HTC
Xalka 2: MobileTrans: Switch ka Android inay HTC iyo HTC in Android
Waxaa soo saaray shirkadda HTC, Tool Transfer HTC waxaa inta badan loo isticmaalaa aad by, ee HTC Mid ka mid ah dadka isticmaala, si ay xog uga soo qalab HTC jir ah ama qalab kale oo Android wareejiyo brand cusub HTC Mid ka mid ah. Sidaa daraadeed, aad wareejin karaan goobaha, wallpapers, Bookmarks, sawiro iyo videos in aad qaado, music, xiriirada iyo fariimaha qoraalka ah.
Faa'iido: Dhulku lacag la'aan ah. Qasaarooyinka: 1. Ka Android wareejiyo oo keliya xogta si HTC Mid ka mid ah . 2. Ma taageeri dhaqaaqin xogta ka HTC in telefoonka ah Android ama kiniin ah. 3. Ma wareejiyo barnaamijyadooda, abuse wac, iyo sawiro iyo video ma galka camera
Talaabada 1: Gacanta ku saabsan HTC Mid ka mid ah oo taga si Goobta . Tubada content Transfer iyo dooran HTC Android phone .
Talaabada 2: aad telefoon Android jir ah, kala soo bixi HTC Transfer Tool ka Google Play oo ku xidh.
Talaabada 3: Orod HTC Transfer Tool oo raac alaabta shaashadda labada telefoonada. Hubi in musmaarradiisa oo ku qoran labada telefoonada waa isku mid.
Talaabada 4: aad telefoon Android jir ah, sax aad content doonayo hormariyo Start si ay u bilaabaan to content ka Android wareejiyo HTC.
Xalka 2: Saxiixa Content dhexeeya Android iyo HTC, Si fudud iyo Fast
The Wondershare MobileTrans ka caawisaa si ay u gudbiyaan Guda wac, music, video, sawiro, SMS, xiriirada iyo barnaamijyadooda ka aalad Android inay HTC, iyo qeybsanaan.
Demi ka mid ah qalab Android inay HTC, iyo habka kale ee ku xeeran
Chine Transfer, music, video, photos, music, xiriirada, jadwalka iyo Guda call in waqti
Si fiican u shaqeeyaan HTC, Samsung, Sony, LG, Motorola, Huawei, ZTE
Iyagoo keliya ma aha qalab Android, laakiin taageeraan iPhone, iPod taabto, iPad iyo in ka badan
Haddii aad isticmaalayso Mac, fadlan ka Wondershare MobileTrans u Mac .
Demi HTC in HTC
Samsung wareejiyo HTC
Copy iPhone in HTC
Nokia dhaqaaq HTC
Sidee si ay u gudbiyaan Apps, Xiriirada, Media, Calendar, wac Log & SMS ka Android inay HTC
The tutorial iyo Screenshot hoos ku qoran yihiin telefoonka Android inay kala iibsiga HTC. Haddii aad rabto in lagu wareejiyo HTC in aalad Android, waxa kale oo aad kala socon kartaa tutorial ah, sababtoo ah waxa ay ku dhowaad isku mid tahay.
Tallaabada 1. Daahfurka Wondershare MobileTrans ah
Ka dib markii la rakibey, ordo Wondershare MobileTrans ku PC Windows ah. In uu furmo suuqa hoose, riix Start si ay u muujiyaan Android in ay suuqa kala iibsiga HTC.
Tallaabada 2. Connect HTC iyo Device ah Android inay PC Windows
Isticmaal fiilooyinka USB in ay ku xidhmaan HTC iyo qalabka kale ee Android inay PC Windows labadaba. Marka software si guul ogaadaa labada qalabka, waxay u muujin doonaa in uu furmo.
Tallaabada 3. Music dhaqaaq, Videos, Xiriirada, Call Log, Photos, Apps, Calendar iyo Farriimihiisa ka Android inay HTC
Hubi in faylasha lagu hubiyaa waa kuwa aad jeceshahay si ay u gudbiyaan. Haddii aan, uncheck kuwa aan la rabin. Markaas, waxaad tagtaa bilow Copy .
Download software ah in ay beddelaan aalad Android inay HTC la mid click!
Xogta laga HTC wareejiyo HTC
Nuqul Faylal ay ka HTC in iPad
Xiriirada kala iibsiga ka HTC in Samsung
Nuqul Faylal ay ka iPhone in HTC
Conatcts ka HTC wareejiyo iPhone
Xogta laga BlackBerry wareejiyo Android
Xogta laga Android wareejiyo macruufka
Faylal ay ka Nokia dhaqaaq Android
Nuqul Faylal ay ka iPad in Android
Conatcts Bedelka in a New Android Phone
Xogta laga iPhone wareejiyo iPhone
Sidee si ay u gudbiyaan SMS, Apps, Media, wac abuse, Calendar iyo Xiriirada ka Android
Sida loo soo gudbiyo qoraalka on iPhone iyo Android
Best 7 Manager Android Photo: Maamul Photo Gallery fudayd
Beddelaan AIFF, M4B, M4R in MP3 for uploading in Google Music
> Resource > Android > Content Transfer ka Android inay HTC, oo ka HTC si fudud Android